Ny toro-làlana farany amin'ny fanonganana any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Ny toro-làlana farany amin'ny fanonganana any Eropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 01/04/2021)
Manerana izao tontolo izao, ny tipping dia misy fiantraikany sy fomba fanao samihafa, ohatra: Ilaina ny tenda any Afrika Atsimo, toy ny ao amin'ny USA. Antenaina ny hamela hivoahana 15 ary 25% any Amerika, ary raha tsy izany dia mety enjehin'ny mpitazona irate ianao. Saingy ny momba an'i Europe? Volavolan-dalàna maro any Eropa no ho tafiditra ao ny toro-hevitra, na izany aza, io dia samy hafa any amin'ny firenena. Ny fahafantarana ny fomba fanao manokana any amin'ny firenena tianao haleha dia hialana amin'ny fisafotofotoana sy ny fihetseham-po ratsy. Dia vakio avy eo raha ny toro-lalana farany amin'ny fandalovana any Eropa!
Torohevitra farany amin'ny fanamoriana any Eropa Amin'ny serivisy
Ny fitrandrahana any Eropa amin'ny ankapobeny dia miovaova arakaraka ny karazana serivisy izay azonao. Ohatra, ianao dia manantena handetika ny mpandroso sakafo any amin'ny trano fisakafoanana dimy kintana amin'ny lafiny hafa amin'ny mpizara iray ao ambadiky ny mpivarotra iray. Bartenders dia tsy hanantena fahatsapana mihitsy amin'ny tranga sasany, izay misy mpamily taxi. Mampiasa ny fahaizanao, ary ny fahalalahan-tanana dia lalana tsara foana rehefa manapa-kevitra amin'ny tendrony marina. koa, ny ankamaroan'ny toerana dia mitaky vola amin'ny vola, dia tokony ho azo antoka fa hitondra fanamarihana vitsivitsy ao aminao Euro amin'ny fotoana rehetra.
Toe-javatra rehetra izay itondrana sakafo na fisotroana eo amin'ny latabatra dia mazàna mitaky tenda. Ny vola dia miankina amin'ny karazana fisakafoanana tianao. Ny fomba fanao amin'ny fametahana any Eropa dia ny mamela ny volavolan-dalàna iray na roa Euro mihoatra ny volan'ny volavolan-dalàna raha toa ny boribory fisotro iray saingy tsy misy sakafo takiana. Ny sakafo feno amin'ny tontolo mipetraka dia tsy mitovy. Raha izany dia, a few euros per person is usually sufficient. Five-star restaurants across Europe usually include the tip in their bill. Aza adino ny manamarina izany satria tsy mila miala amin'ny tendro fanampiny raha tsy tena tianao ny serivisy. Ny serivisy tsara dia mitaky tendron-tsampy fanampiny, koa amin'ireto tranga ireto, mety handeha hatramin'ny farany ianao 15%.
Ny ankamaroan'ny pub na bara manerana ny kaontinanta dia tsy manantena torohevitra mihitsy. Voaloa karama ny Bartenders, ary raha amina vola madinika vitsivitsy ao anaty tavoara kely dia mety hankasitrahana tokoa, tsy ilaina izany. raha manao tendro ianao, tadidio indray fa mampiasa vola ihany, na an-tsoratra na vola madinika. Raha izany dia tsy misy farany ianao eto ny lisitry ny 5 Best barany Live Music In Eoropa.
Stylists Ary Spa's
Betsaka ny olona te hahazo taovolo vaovao vaovao, na diteza manafaka tokoa mandritra ny fialantsasatra. Soa ihany fa ho hitanao ny spa sy ny stylists eran'i Eropa, matetika sa saika isaky ny tanàna. Tipping, na ahoana na ahoana, matetika eo amin'ny folo isan-jato eo ho eo. Raha faly be ianao amin'ny serivisy izay azonao, mety miakatra toy ny avo be ianao 15%.
Ny hotely dia fanontaniana matetika momba ny resaka mamontsina any Eropa. Ho toy ny fitsipika iray ankafiziny, tokony manaraka ny torolàlana iray amin'ny Euro iray. Ity farany dia milaza fa mamela iray Euro amin'ny toro-hevitra isaky ny serivisy ianao. Raha misy bàlety na seranana mitondra ny kitaponao, dia ampy ny Euro iray isaky ny kitapo. Ny fanadiovana trano dia tokony hahatratra Euro iray isan'andro. Ny fandefasana ny volanao dia araka ny sainao manokana, saingy tokony hiankina amin'ny haavon'ny serivisy azonao izany. Raha efa teny ambony izy ireo ka tsy afaka hadino sy mahafinaritra anao ny fijanonanao, dia tendrony dimy ka hatramin'ny folo euro na mihoatra aza no mety.
Tapakila Leipzig mankany Berlin
Inona no tokony hatao amin'ny taxi taxi And Transport
Ny taxi sy Uber dia ampahany anatiny amin'ny fandehanana any Eropa. Rehefa misafidy izay tendro, dia tsara indrindra ny mitadidy ny fomba andoavam-bola ny mpamily. amin'ny ankapobeny, anefa, Toro roa Euro iray ho an'ny fiarakaretsaka fohy na Uber iray dia mety. Ny fampiharana toy ny Uber dia ahafahanao manondro ny mpamily amin'ny fomba elektronika, raha ny taxi mirefy dia mitaky vola. Ny fitsangantsanganana any Eropa rehefa mandeha an-tongotra dia mitovy amin'ny famafazana trano fisakafoanana na trano fisakafoanana. Ataovy ao an-tsaina fa tsy ilaina foana io, but often appreciated. Famandrihana ny tapakilan'ny lamasininao noho ny Eoropa diany Tsotra sy mora amin'ny tranokala tapakila mora indrindra eto an-tany.
Torohevitra farany amin'ny fanamoriana any Eropa amin'ny firenena
Ny ankamaroan'ny firenena dia manaraka ny torolàlana ankapobeny ihany rehefa misy dikany any Eropa. Mazava ho azy, ny iray dia tokony ho foana fikarohana ny tanjona kendrena alohan'ny dian-tongotra mba hahazoana antoka fa feno hatrany ianao. Train Tsidika matetika mitondra anao amin'ny firenena maro amin'ny fotoana mitovy, ka azo antoka fa mahasoa izay tokony hatao isaky ny manampy foana. Ny firenena sasany dia tsy mifanipaka amin'ny mpifanolobola, na izany aza.
Islandy sy Scandinavia
Na fanimbana ny fiaviany Viking fotsiny izany na fahakingana tsotra fotsiny, Ireo firenena ireo dia maniry anao tsy handroso mihitsy. Ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana sy serivisy dia hanana ny tendron'ny tafiditra ao anaty volavolan-dalàna. Mbola mety ny manodina ny volavolan-dalàna hatramin'ny Euro akaiky indrindra fa tsy tendrony amin'ny alàlan'ny carte de crédit na carte de crédit.
Ny ataon'ny grika dia manao ny zavatra rehetra tsy mitovy, ary ny fitrandrahana dia tsy misy dikany. Ny volavolan-dalàna lehibe kokoa dia mila torohevitra kely kokoa ary volavolan-dalàna kely kokoa dia mila toro-hevitra lehibe kokoa.
Miala farafaharatsiny a 5% tendron'ny, vola ho an'ny mpizara, even if the bill includes gratuity. Cash is always king in most European countries, ary tsy mitovy ny an'i Aotrisy.
Inona no toro-hevitra any Irlandy sy any Ekosy
Fantatra noho ny fisakaizan'izy ireo, samy hitondra ny kitapom-pifalianao ireo firenena roa ireo. Tsy ilaina ny fitrandrahana entana ho an'ny seranana, ary matetika tsy antenaina. Mamindra fo sy miteny fa misaotra am-panajana, na izany aza, andrasana. Raha te hahazo serivisy mitovy amin'ny serasera ianao raha te hahita, aza adino ny manaiky azy ireo amin'ny fomba tsara.
Inona no toro-hevitra any Eropa – Grande-Bretagne
Betsaka ny anglisy no niezaka nanazava ny mpizahatany fa tena tsy ilaina ny fitrandrahana trano. Raha misy hiteny any Eropa, ity dia iray amin'ireo fitsipika hentitra. Aza asiana tendron-trano ao amin'ny efitranonao, azo inoana fa hatolotra eo amin'ny birao aloha ho very vola. Tsy manantena toro-hevitra ihany koa ny Bartenders, ary ny fitrandraka azy ireo dia azo avela ahona. Amin'ny lafiny rehetra, manaova finaritra ary manaiky ny bartender anao. Asio vola madinika vitsivitsy ao anaty tavoara raha misy. Raha tsy, aleo miala ny tendron'ny fampitoviana.
Mivalona amin'ny fampahalalana rehetra momba ny fametahana any Eropa
Ny torohevitra tsara indrindra amin'ny fanaovana tipping any Europe dia ny fanaovana ny entimodinao. Vakio daholo ny momba ny firenena, na firenena mikasa ny hitsidika anao. tadidio izany Ny fitsangatsanganana lamasinina matetika no mitondra anao amin'ny firenena maromaro mba hajanonao ny hijanona eo. Mitondrà vola hatrany, ny vola madinika roa, ary naoty vitsivitsy hitadiavana vola. Raha tsy matoky ny politika ianao, mifikitra amin'ny fitsipika folo isan-jaton'ny trano fisakafoanana, and the one Euro rule for everything else.
Tsarovy, Tianao ny hampianatra anao momba ny Travel, ka rehefa mety ny fotoana dia manapa-kevitra ianao ny handeha, tadidio fa ny fitsangatsanganana lamasinina no ha manokana ataontsika ary misafidy Save A Train, tianay ny hanampy anao hankafy ny dia!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Ny toro-làlana farany amin'ny fanonganana any Eropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-tipping-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#trano fisakafoanana europetravel Food TippingEurope Train Travel traveltips Vacations